Posted by Tranquillus | Jan 18, 2020 | Xafiiska
Waxaa jira dhowr siyaabood oo loo sameeyo u shaqee koox ahaan meel fog. Habka ugu caansan ayaa ah sheekada. Si kastaba ha noqotee, si ay sifiican ugu shaqeeyaan, shaqaaluhu waxay u baahan yihiin inay ogaadaan waxa saxda ah ee ay dhiganayaan. Wadaagista shaashadda, sida tan oo ay bixiso KooxdaViewer markaas waxtar ayey yeelan kartaa.
Waa maxay TeamViewer?
TeamViewer waa barnaamij kuu ogolaanaya inaad gasho meel fog. Si kale haddii loo dhigo, waxay kuu oggolaaneysaa inaad gasho oo aad maamusho kombiyuutarka fog. Software-ka wuxuu siiyaa marin u helka barnaamijyada iyo feylasha kombiyuutarka fog. Si kastaba ha noqotee, khalkhal galinta suurtagalka ah waxay ku egtahay kuwa uu ogolaaday kombiyuutarka martida loo yahay. Software-kan waxaa loo isticmaali karaa labadaba ganacsi ama sababo gaar ah. Waxaa jira noocyo kala duwan oo iswaafaqsan oo loogu talagalay mashiinnada Windows, Mac iyo Linux. Noocyada moobiilka ayaa sidoo kale jira waana suurtagal in laga helo koontadaada TeamViewer iyada oo loo marayo shabakadda. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu amniga badan suuqa. Xaqiiqdii, waxay u shaqeysaa si dhammeystiran iyada oo aan loo baahnayn in la joojiyo firewall ama barnaamij kale oo amniga ah. Xog wareejinta waa la xareeyay si aan shaqsiyaad xaasidnimo ah u xadin. Waxaa jira laba nooc oo barnaamijka loogu talagalay bartilmaameedyo kala duwan. Nooca macaamiisha ayaa gebi ahaanba bilaash ah waxaana loo isticmaali karaa nidaam kasta oo ku shaqeeya. Nooca ganacsigu waa mid la qaadi karo oo qiimihiisu wuxuu kuxiran yahay barxadda. Tusaale ahaan, kiiska isticmaalka Windows, qiimaha wuxuu ka bilaabmaa 479 euro. Marka lagu daro awood u yeelo ka fog, waxay siisaa isticmaaleyaasheeda qalab kale oo badan oo waqtiga waqtiga ku badbaadiya. Qalabkani waa mid waxtar leh maxaa yeelay waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku qabato shaqo kombuyuutar adigoon jir ahaan joogin. Software-ka ayaa waliba faa iido u leh caawinta mid ka mid ah shaqaalahaaga inuu si toos ah dhibaatada ugu xaliyo kombuyutarkiisa.
READ U dhig sanduuqaaga boostada sidii sanduuq muusig
Sidee buu u shaqeeyaa TeamViewer?
Deeqa isticmaal TeamViewer, waa inaad marka ugu horeysa kala soo degtaa softiweerka softiweerka rasmiga ah isla markaana ku rakib. Rakibaadda ma aha wax dhib badan, maaddaama ay ku filan tahay in la raaco tillaabooyinka uu muujiyey barnaamijka. Si aad uhesho kombuyuutar fog iyadoo la adeegsanayo barnaamij softiweer ah, si kastaba ha noqotee, kumbuyuutarka bartilmaameedka ah waa inuu sidoo kale rakibay TeamViewer. Sida ugu dhakhsaha badan software-ka la bilaabay, waxaa loo qoondeeyay aqoonsi iyo eray sir ah. Kuwani waxay faa'iido u yeelan doonaan inay u oggolaadaan macmiilka fog fog inuu galo kombuyuutarka. Si kastaba ha noqotee, xogtan ayaa is-beddeleysa markasta oo software-ka dib loo furo. Nidaamkani wuxuu ka horjoogsanayaa dadka horay ugu xirnaa kombiyuutarka inay mar labaad galaan iyadoo aan rukhsadda lagaa helin. TeamViewer sidoo kale waxay leedahay muuqaal loo yaqaan kaamka adeegga. Waa qalab wax ku ool ah oo u oggolaanaya farsamayaqaannada IT inay bixiyaan taageero farsamo oo fog. Xerada adeega sidoo kale waxay kuu oggolaaneysaa inaad qabato howlo kale oo badan oo ay ka mid yihiin ku darista shaqaalaha ama sameynta sanduuqyada soo dhoweynta.
Daaqadda software-ka, waxaa jira laba ikhtiyaar oo waaweyn. Midda koowaad waa tan u oggolaanaysa marin fog. Ta labaad waxay oggolaaneysaa maareynta kulanka. Xaaladda meelaha fog laga galo, waxaad leedahay laba ikhtiyaar. Marka hore waad awoodaa meel fog ka gali kombuyutarka qofka adoo muujinaya aqoonsigiisa ka dibna furahiisa sirta ah. Si aad u oggolaato marin-u-helka fog, waa inaad la wadaagtaa caddayntaada qofka raba inuu galo kombuyuutarkaaga. Waa in la ogaadaa in isgaarsiintani ay dhici karto oo keliya inta u dhaxaysa laba kombuyuutar. Muuqaalka kale ee KooxdaViewer waa qorsheynta kulanka. Waa aalad waxtar leh oo kuu oggolaaneysa inaad kulammo la yeelato kuwa aad iska kaashanayso. Waxay fursad u heli doonaan inay ku arkaan waqtiga dhabta ah waxa ka muuqda shaashadda kombiyuutarka ee marti gelinaya kulanka. Si aad u abuurto kulan, kaliya tag "kulanka" tab. Laga bilaabo halkaas, waxaad ku buuxin kartaa foom ay ku jiraan macluumaad ku saabsan kulanka (Aqoonsiga kulanka, lambarka sirta ah, waqtiga bilawga, iwm). Faahfaahintan waa in loo diraa dadka ay quseyso emayl ama taleefan. Kadib waxaad bilaabi kartaa wareejinta adoo tagaya "Kulannadayda". Adoo gujinaya xiriirinta loo diray iyaga, casuumad ayaa awoodi doonta inay galaan kulanka.
Faa'iidada iyo qasaarooyinka kooxdaViewer
Faa'iidada ay leedahay kooxdaVieawer waa in ay saamaxdo shaqo fog Si deg deg ah oo sahlan oo khadka dhulka ah. Uma baahnid inaad jir ahaan goob joog u ahaatid si aad ugu hormariso shaqadaada xafiiska, taas oo aad u faa'iido badan gaar ahaan xilliga shaqo joojinta. KooxdaViewer, kaliya waa inaad kaga tagtaa kumbuyuutarkaaga shaqada si aad uga hesho kombuyuutar kasta ama taleefan ama qaab amaan ah. walax ayaa u qaddarin doonta. Si kastaba ha noqotee, xitaa iyadoo la eegayo heerka amni ee uu softiweerku adeegsaday, isticmaalkiisu wuxuu ka dhigayaa taxaddar qaar lagama maarmaan. Qofka ugu horreeya ee ixtiraama ma noqon doono inuu qof kale siiyo gelitaanka kombuyuutarkaaga. Adoo tagaya, tusaale ahaan, kalfadhi furfuran oo joogto ah xafiis furan oo galaangal u leh.
Kala fogow la shaqee TeamViewer inta lagu jiro shaqo joojinta 25-Abriil, 2020Tranquillus
horeSmartnskilled: goobta tababarka khadka tooska ah ee kulmaan dhammaan baahiyaha
socdaKula shaqee koox ahaan iyo meel fog barta 'Slack' La xiriir waqtiga dhabta ah
Sidee loo sameeyaa keyboard gaaban gudaha Windows 10?